Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka “Dhowr qof ayaa u xiran dhuxul laga dhoofiyey Baraawe” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa sheegay in baaritaan uu ku socdo xubno ka tirsan dowladda oo loo haysto dacwad la xiriirta dhoofinta dhuxusha ee degmada Baraawe, kadib markii uu maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa.
Axmad Cali daahir Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa ka hadlay Arrinta dhoofinta dhuxusha oo horay Amaro looga soo saaray kaasi oo ahaa in talaabo laga qaadi doono cidii lagu helaa falkaas
Xeer ilaaliyaha ayaa tilmaamay in isaga iyo xubno kale ay u tageen degmada Baraawe inay wax ka ogaadaan mas’uuliyin ka tirsan dowladda oo lagu eedeeyay inay gacan siiyeen ganacsato dhoofineysay dhuxul gaar ahaan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Xeer Ilaaliyaha ayaa sheegaya in tuhunkaas loo xiray xubno ka tirsan maamulka degmada Baraawe, saraakiisha Nabad Sugidda, Taliyaha ciidamada milateriga ee degmadaas iyo xubno ganacsato ah.
“Baaritaan ayaan u baxnay aniga iyo xubno kale oo ila socday waxaan soo ogaanay in degmada Baraawe laga dhoofiyay dhuxul, waxaa noo suurto gashay in gacanta aan ku soo dhigno dad la tuhunsanyahay oo isugu jira ganacsato iyo mas,uuliyiin kale, hadda way xiranyihiin waxaana si dhab ah loo baarayaa dacwadaha loo haysto” ayuu yiri Xeer ilaaliyaha Qaranka.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir oo wax laga weydiiyey iney falka dhoofinta ah ku lu lahaayeen ciidamada AMISOM iyo inkae ayaa sheegay in ciidamadaas aysan wax lug ah ku laheyn arrintaas.
Axmed Cali Daahir ayaase xusay iney ciidamada AMISOM u heystaan eed ah iney ka gaabiyeen shaqadooda, maadaama ay dalka ku joogaan ogolaashaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, kaasoo sidoo kale mamnuucay in Soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa sheegay in Sanadka Cusub xafiisyada Xeer ilaalinta laga furi doono Toban Gobol oo ka tirsan Gobolada dalka wuxuuna tilmaamay in la meel mariyay sharciyadii ay ku shaqayn lahayeen taas oo uu uga Mahad celiyay madaxda dowladda.
Ugu dambeyn Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmad Cali Daahir oo ka hadlay Arrimo badan ayaa sheegay in sanadkaan ay dhamaystiri doonaan Nidaamka uu ku shaqayn doono xafiiska xeer ilaalinta Qaranka.